Nyeinlatt.com: iPhone ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုခုမှာ ပြသာနာဖြစ်ခဲ့ရင် ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ အခြေခံပြုပြင်နည်း
iPhone ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုခုမှာ ပြသာနာဖြစ်ခဲ့ရင် ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ အခြေခံပြုပြင်နည်း
iPhone ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုခုမှာ ပြသာနာဖြစ်ခဲ့ရင် (ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်ခဲ့ရင်) ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ အခြေခံပြုပြင်နည်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းနည်းလေးတွေ ကတော့ Restarting iPhone, Force quitting an app နဲ့ Resetting iPhone တို့ဖြစ်ပါတယ်။
To restart iPhone, first turn iPhone off by pressing and holding the On/Off Sleep/Wake button untilared slider appears. Slide your finger across the slider and iPhone will turn off afterafew moments.
Next, turn iPhone on by pressing and holding the On/Off Sleep/Wake button until the Apple logo appears.
If you cannot turn off iPhone or if the problem continues, you may need to reset iPhone.
Foce App to close
Is iPhone not responding? To reset iPhone, press and hold the On/Off Sleep/Wake button and the Home button at the same time for at least 10 seconds, until the Apple logo appears.
အခြေခံဖြေရှင်းနည်းလေးတွေပါ။ တခြားဖြေရှင်းနည်းလေးတွေ ကိုလည်း လေ့လာလို့ရအောင်
အောက်က link လေးမှာ သွားပြီး လေ့လာလိုက်ပါ။
အဆင်မပြေသေးဘူး ဆိုရင်တော့ iPhone ကို iTunes နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Update ဒါမှမဟုတ် Restore လုပ်လိုက်ပါ။
ကိုးကား ။ ။ http://www.apple.com/
Posted by Nyein Latt at 2:03 AM